သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတိပေးမယ့် Disaster Alert V3.0.2 APK - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Phone Application သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတိပေးမယ့် Disaster Alert V3.0.2 APK
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတိပေးမယ့် Disaster Alert V3.0.2 APK
Maung Pauk at 10:38:00 PM Android Application, Phone Application,
Disaster Alert V3.0.2 APK
Disaster Alert V3.0.2 APK : 2.9 Mb
Disaster Alert ကတော့ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတိပေးမယ့် App ဖြစ်ပါတယ်.. မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှု၊ ဆူနာမီ၊ ရေကြီးခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း စတဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို ဒီ App က ဖေါ်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်.. အင်တာနက်အချိတ်အဆက်တော့လိုမှာပေါ့.. ဒါမှ ကမ္ဘာ့အခြေအနေတွေကို သိနိုင်မှာလေ.. လိုအပ်ရင်တော့ ယူထားသင့်ပါတယ်..
[ Disaster Alert ကတော့ ကမ်ဘာ့တဈဝှမျးမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှကေို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ သတိပေးမယျ့ App ဖွဈပါတယျ.. မုနျတိုငျးတိုကျခတျမှု၊ ဆူနာမီ၊ ရကွေီးခွငျး၊ မီးတောငျပေါကျကှဲခွငျး စတဲ့ ဆိုးရှားလှတဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှေ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာ ဖွဈပကျြနတေယျဆိုတာကို ဒီ App က ဖျေါပွပေးသှားပါလိမျ့မယျ.. အငျတာနကျအခြိတျအဆကျတော့လိုမှာပေါ့.. ဒါမှ ကမ်ဘာ့အခွအေနတှေကေို သိနိုငျမှာလေ.. လိုအပျရငျတော့ ယူထားသငျ့ပါတယျ.. ]
It seems like Mother Nature is striking back. A high-intensity quake measuring 7.9 on the Richter scale rocked Nepal along with many parts of north and east India. Most of us ownasmartphone. Technology has enhanced and many developers have designed apps that can get alerts of earthquakes and tsunamis as they happen. So I Bring You The App Which Can Help You out And Predict Any Disaster .